प्रकाश (Light) - ShivaDeep Skill Education
1) रातमा वस्तु नदेखिने तर दिनमा वस्तु देखिने कारण के होला?
2) हामी वस्तु कसरी देख्छौं?
3) अप्टिकल उपकरण भनेको के हो? यसको महत्त्व र कुनै दुई उदाहरणहरु लेख्नुहोस।
4) मानव आँखामा कुन लेन्स हुन्छ?
5) लेन्स भनेको के हो? उपयोग हुने आधारमा लेन्स कति प्रकारका हुन्छन्? ति के के हुन?
6) कन्भेक्स लेन्स कस्तो हुन्छ? चित्रद्वारा देखाउनुहोस।
7) कन्भेक्स लेन्सलाई कन्भर्जिङ्ग लेन्स भनिन्छ, किन?
8) कन्भेक्स लेन्सले घामलाई एक टुक्रा कागजमा केन्द्रित गर्दा कागज बल्छ, किन?
9) कन्केभ लेन्स कस्तो हुन्छ? चित्रद्वारा देखाउनुहोस।
10) कन्केभ लेन्सलाई डाइभर्जिङ्ग लेन्स भनिन्छ, किन?
11) बक्रताको केन्द्र भनेको के हो? कन्भेक्स र कन्केभ दुवै प्रकारका लेन्सहरुको चित्र बनाएर बक्रताको केन्द्र देखाउनुहोस।
12) प्रमुख अक्ष भनेको के हो?
13) अप्टिकल केन्द्र भनेको के हो? यसलाई के ले जनाइन्छ?
14) कन्भेक्स लेन्सको केन्द्रीकरण बिन्दु (F) भनेको के हो? चित्रद्वारा देखाउनुहोस।
15) कन्केभ लेन्सको केन्द्रीकरण बिन्दु (F) भनेको के हो? चित्रद्वारा देखाउनुहोस।
16) केन्द्रीकरण दुरी (f) भनेको के हो?
17) लेन्सले प्रकाश आवर्तन गर्छ, किन?
18) लेन्सबाट हुने प्रकाश आवर्तनका नियमहरु लेख्नुहोस।
19) निम्न अवस्थामा कन्भेक्स लेन्सले बनाउने आकृतिलाई किरण रेखाचित्रद्वारा देखाउनुहोस र आकृतिको चार ओटा विशेषताहरु लेख्नुहोस।
(क) वस्तुलाई अनन्तमा राख्दा।
(ख) वस्तुलाई 2F भन्दा पर राख्दा।
(ग) वस्तुलाई 2F मा राख्दा।
(घ) वस्तुलाई F र 2F को बिचमा राख्दा।
(ङ) वस्तुलाई F मा राख्दा।
(च) वस्तुलाई F र O को बिचमा राख्दा।
20) निम्न अवस्थामा कन्केभ लेन्सले बनाउने आकृतिलाई किरण रेखाचित्रद्वारा देखाउनुहोस र आकृतिको चार ओटा विशेषताहरु लेख्नुहोस।
(ख) वस्तुलाई अप्टिकल केन्द्र र अनन्त बिचमा राख्दा।
21) लेन्सको सामर्थ्य भनेको के हो? यसको शुत्र र एकाइ लेख्नुहोस।
22) लेन्सको सामर्थ्य र यसको केन्द्रीकरण दुरी बिच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ?
23) सामर्थ्य +10D भएको एउटा हाते लेन्सको सहायताले पुस्तकको अक्षर पढ्नु पर्यो भने पुस्तक देखि लेन्स कति टाढा राख्नुपर्छ?
24) कन्भेक्स र कन्केभ लेन्स बिच दुई फरक लेख्नुहोस । यि लेन्सका दुई दुई उपयोगिताहरु लेख्नुहोस।
25) विस्तृतिकरण भनेको के हो? विस्तृतिकरण नाप्ने तरिका व्याख्या गर्नुहोस्।
26) विस्तृतिकरणको शुत्र लेख्नुहोस। यसको कुनै एकाइ हुँदैन, किन?
27) मानव आँखाको सफा चित्र बनाउनुहोस।
28) आँखाका मुख्य तिन तहहरु स्क्लेरा, कोरोइड र रेटिनाको महत्त्व लेख्नुहोस।
29) आँखाका निम्न भागहरुको एक एक कार्य लेख्नुहोस।
कन्जङ्टिभा, कर्निया, आइरिस, नानी, लेन्स, सिलियरी मांसपेशी, अप्टिक नर्भ, एक्वायस ह्युमर, भिट्रीयस ह्युमर।
30) आँखाको समायोजन भनेको के हो?
31) आँखाको सामान्य रेन्ज भनेको के हो?
32) टाढाको बिन्दु भनेको के हो? सामान्य अवस्थामा रहेको आँखाको लागि यो कहाँ हुन्छ?
33) नजिकको बिन्दु भनेको के हो? सामान्य अवस्थामा रहेकोे आँखाको लागि यो कहाँ हुन्छ?
34) आँखाको हेर्ने शक्तिमा कमजोरी भनेको के हो? आँखाको हेर्ने शक्तिमा कति प्रकारको कमजोरी हुन्छ? ति के के हुन?
35) अदुर दृष्टि भनेको के हो? यो कमजोरीको कारण के हो? यो कमजोरी भएको आँखाको चित्र कोर्नुहोस। यो कमजोरी सुधार गर्ने उपाय के के होला ? यस प्रकारको कमजोरी हटाइएको आँखाको चित्र बनाउनुहोस।
36) अदुर दृष्टिको कमजोरी हटाउन कन्केभ लेन्स (Concave Lens) नै प्रयोग गर्नुपर्छ, किन?
37) अदुर दृष्टिको कमजोरी कन्भेक्स लेन्स (Convex Lens) को सहायताले हटाउन सकिदैन, किन?
38) दुर दृष्टि भनेको के हो? यो कमजोरीको कारण के हो? यो कमजोरी भएको आँखाको चित्र कोर्नुहोस। यो कमजोरी सुधार गर्ने उपाय के के होला? यस प्रकारको कमजोरी हटाइएको आँखाको चित्र बनाउनुहोस।
39) दुर दृष्टिको कमजोरी हटाउन कन्भेक्स लेन्स (Convex Lens) नै प्रयोग गर्नुपर्छ, किन?
40) दुर दृष्टिको कमजोरी कन्केभ लेन्स (Concave Lens) को सहायताले हटाउन सकिदैन, किन?
41) निम्न अवस्थाहरुमा आँखामा हुने कमजोरीको प्रकार लेख्नुहोस। यि कमजोरीहरुका कारण लेख्नुहोस। यि कमजोरीहरु भएका आँखाका चित्र कोर्नुहोस। यि कमजोरीहरु सुधार गर्ने उपाय लेख्नुहोस। यि कमजोरीहरु हटाइएका आँखाका चित्र बनाउनुहोस।
(क) एक व्याक्ति जसले पत्रिका आँखाबाट धेरै नजिक राखेर मात्र पढ्न सक्छ।
(ख) कक्षाको अन्तिम बेन्चमा बसेको विद्यार्थी जसले आफ्नो अगाडि रहेको पाठ्यपुस्तकको अक्षर देख्न सक्छ तर कालोपाटिमा लेखेको अक्षर देख्न सक्दैन।
(ग) एक व्याक्ति जसले पत्रिका आँखाबाट टाढा राखेर मात्र पढ्न सक्छ।
(घ) एक विद्यार्थी जसले आफ्नो अगाडि रहेको पाठ्यपुस्तकको अक्षर देख्न सक्दैन तर कालोपाटिमा लेखेको अक्षर देख्न सक्छ।
42) निहारिकाले लगाएको चस्मामा -2D लेखिएको छ। उनको चस्मामा कुन प्रकारको लेन्स प्रयोग भएको छ? आँखामा भएको कुन प्रकारको कमजोरी हटाउन उनले यो चस्मा लगाएकी हुन? उक्त कमजोरीको कारण के हो? चस्मा नलगाएको र लगाएको दुवै अवस्थामा उनको आँखामा बन्ने आकृतिलाई किरण रेखाचित्रद्वारा देखाउनुहोस।
43) अभिमतले लगाएको चस्मामा +2D लेखिएको छ। उनको चस्मामा कुन प्रकारको लेन्स प्रयोग भएको छ? आँखामा भएको कुन प्रकारको कमजोरी हटाउन उनले यो चस्मा लगाएका हुन? उक्त कमजोरीको कारण के हो? चस्मा नलगाएको र लगाएको दुवै अवस्थामा उनको आँखामा बन्ने आकृतिलाई किरण रेखाचित्रद्वारा देखाउनुहोस।
Previous Postताप (Heat)
Next Postधारा विद्युत र चुम्बकत्व